Pyae Phyo (MMiTD): ♪ ဝန်ဇင်းမှာ စာဖတ်ပြီး Selfie ဘုရင် OPPO F1s ကို စက်တင်ဘာတစ်လလုံး တစ်နေ့တစ်လုံး ရယူလိုက်ပါ! ♫
♪ ဝန်ဇင်းမှာ စာဖတ်ပြီး Selfie ဘုရင် OPPO F1s ကို စက်တင်ဘာတစ်လလုံး တစ်နေ့တစ်လုံး ရယူလိုက်ပါ! ♫
ဝန်ဇင်း App မှာ စာဖတ်ရင်း စာပေဗဟုသုတလဲရ၊ Selfie ရိုက်ဖို့ ဖုန်းအလန်းလေးလည်းရအောင် သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဝန်ဇင်းက OPPO နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး စီစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဝန်ဇင်းမှာ Login ဝင်ပြီး စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတိုင်းကို September တစ်လလုံး Selfie ဘုရင် OPPO F1s တစ်နေ့တစ်လုံး ရွေးချယ်ကံစမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ဇင်းရဲ့ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ OPPO F1s ဖုန်းအသစ်တွေကံထူးဖို့ အခုပဲ ဝန်ဇင်း App ကို Install လုပ်ပြီး စာအုပ်တွေဖတ်လိုက်ရအောင်!!
အဆင့် ၁။ ဝန်ဇင်း App ကို အောက်ပါ Link မှ Download လုပ်ပါ။
Google Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bit.wunzin)
အဆင့် ၂။ ဝန်ဇင်း App ကို သင့်ဖုန်းတွင် Install ပြုလုပ်ပါ။
အဆင့် ၃။ ဝန်ဇင်း App ကိုဖွင့်ပြီး မိမိ၏ Facebook Account ဖြင့် Login ဝင်ရောက်ပါ။ Email အကောင့်နဲ့ Register လုပ်ပြီး Login ဝင်ရင်လဲရပါတယ်။
အဆင့် ၄။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို Download လုပ်ပြီး ဖတ်လိုက်ပါ။ (Sample ဖြစ်ဖြစ်၊ Free Book ဖြစ်ဖြစ်၊ ဝယ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ် ရပါတယ်။)
အဆင့် ၅။ ဒီ Status အောက်မှာ Done လို့ Comment လာပေးပေးပါ။ (ဖတ်နေတဲ့စာအုပ် Screenshot လေးပါ ပါရင် ပိုကောင်းပါတယ်။)
နေ့အလိုက် ဝန်ဇင်းမှာ စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေထဲကမှ ကံထူးရှင်ကို ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဥပမာ ၃.၉.၂၀၁၆ ရက်နေ့မှာ ဝန်ဇင်းမှာစာအုပ်ဖတ်ရင် ဖတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေဟာ ၃.၉.၂၀၁၆ နေ့ရဲ့ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ )ဒါကြောင့် နေ့တိုင်း ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ဝန်ဇင်းမှာ တစ်ရက်တစ်ခါ စာအုပ်ဖတ်ပေးဖို့တော့ လိုမယ်နော်!!!
ကံထူးသူကို ၁.၉.၂၁၀၆ မှ ၃၀.၉.၂၀၁၆ အထိ နေ့စဉ် နေ့လည်ပိုင်းတွေမှာ ကြေငြာသွားမှာဖြစ်ပြီး အီးမေးလ် (သို့) Facebook (သို့) Register ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းနံပါတ် နဲ့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုရရှိကြောင်းကိုလဲ WunZinn ရဲ့ Facebook Page မှာတင်ပေးသွားမှာပါ။ ဆုထုတ်ယူရမယ့် အစီအစဉ်အသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာ WunZinn နှင့် OPPO မှ ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ခွင့်မရှိပါဖူး။ ဆုရွေးချယ်မှုဟာ ဝန်ဇင်းအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာအတည်ဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက ဝန်ဇင်းဖုန်းနံပါတ် 09260799640 သို့ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ 09252545753 သို့ Viber ဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အခြားသူငယ်ချင်းတွေလဲ ပါဝင်လို့ရအောင် ဒီ အကြောင်းလေးကိုလဲ Share ပေးကြပါဦး။
OPPO F1s ဖုန်းရဲ့ အသေးစိတ်ကို သိရှိအောင် https://www.facebook.com/oppomyanmar/ မှာ သွားကြည့်နိုင်တယ်နော်!
ဝန်ဇင်းမှာ စာဖတ်ရင်း Selfie ဘုရင် OPPO F1s ဖုန်းတွေကို တစ်နေ့တစ်လုံး ကံစမ်းလိုက်ပါ!!!
#wunzinn #wunzinn_oppo #oppof1s #oppof1selfieexpert